50 Jeer Ayaa Wejiga Laga Qalay Si Ay Ugu Ekaato Qof Ay Ka Heshay - Jigjiga Online
HomeWararka Caalamka50 Jeer Ayaa Wejiga Laga Qalay Si Ay Ugu Ekaato Qof Ay Ka Heshay
50 Jeer Ayaa Wejiga Laga Qalay Si Ay Ugu Ekaato Qof Ay Ka Heshay
Telefishen kamid ah kuwa dalka Iran ayaa baahiyay wareysi uu la yeeshay gabar caan ka ah aalada Instagram, taas oo la xiray horaantii bishan, kadib markii lagu eedeeyay in ay aflagaadeysay diinta Islaamka.
Sahar Tabar, ayaa caan ka noqotay caalamka oo dhan iyo baraha bulshada, kadib markii ay wajigeeda ku sameysay 50 qalliin, si ay ugu ekaato aktaradda caanka ah ee Mareykanka, Angelina Jolie.
Gabadhan ayaa la xiray shanti bishan Oktobar, oo waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay wax ka sheegtay xjibaaka ay xirtaan gabdhaha Muslimiinta iyo in ay da’ yarta ku dhiiragelisay musuqmaasuqa.
Wakaaladda wararka ee Tasnim ee dalka Iran ayaa kusoo warrantay in xariga gabadha lagu saleeyay cabasho ka timid dadweynaha oo doonayay in gabadhan sharciga lala tiigsado, dacwadda loo heystana la sii ambaqaado.
Bil kadib telefishenka Iranian Channel Two ayaa baahiyay wareysi uu la yeeshay gabadhan oo uu ku tilmaamay in ay sameysay tallaabooyin argagax leh, si ay caan uga noqoto barah bulshada, arrintaas oo saameyn xoog leh ku yeelatay nolasheeda.
Gabadhan ayuu telefishenka sheegay in ay tahay gabadh madi ah oo aysan jirin ilma kale oo la dhashay, waalidkeedana ay horay u kala tageen.
“Uma eki sawirka been abuurka ah ee la iga sameeyay”, ayay tiri Tabar oo beenisay wararka ay bahiyeen warbaahinta qaar ee ah in ay dooneysay in ay u ekaato Angelina Jolie, jiaal caan ah.
“Yaranteyda waxaan doonayay in aan noqdo qof caan ah”, ayay raacisay 22 jirkan oo sidoo kale aad sawairadeda usoo dhigta baraha bulshada.
Waxaa kale oo ay sheegtay in hooyadeed ay ka waanisay tallaabada ay qaaday ee ah in ay wajigeeda badesho, balse aysan dhageysanin oo ay iska wadatay howsheeda.
Waxaa kale oo ay sheegtay in dad kale ay kula taliyeen in ay wajiga badesho.
“Mararka qaar hadalada ay kuu sheegayaan dadka aadan aqoonin iyo saaxiibadaada, waxay ka muhiim san yihiin kuwa ay kuu shegayaan waalidka”, ayay tiri.
Tallaabadan ay qaaday Sahar Tabar, ayaa xiligas dood ka dhex abuurtay dalka Iran iyo guud ahaan baraha bulshada, oo qaar badan oo kamid ah dadka waxaa ay shegeen in gabadhan ay markii hore quruxsaneyd, haatanna ay ku dheeshay muuqaalkii wanaagsanaa ee ay lahayd, halka kuwa kalena ay ku doodayeen inay ikhtiyaar u leedahay inay badesha wajigeeda iyo in kale.
Dad badan ayaa aad uga carooday wareysiga uu telefishenka la yeeshay gabadhan, oo qaar kamid ah waxay ku andacoonayeen in aysan ku hadlin hadal micno u sameeyay daawadayaasha, halka qaar kalena ay u arkayeen “qof xanuunsan” oo aan loo baahneyn in la wareysto, kuwaas oo aad uga careysnaa eedeeymaha loo jeediyay gabadhan ee ahaa in ay u gaftay diinta Islaamka.
Mid kamid ah dadkaas ayaa waxaa uu yiri: ” Sahar Tabar ayay soo fariisiyeen telefishen, sababtoo ah waxay leedahay waxyaabo jirkeeda ku xardhan, sabatoo ah waxay lacag ka sameysaa barta Instagram ay ku leedahay, taas waxaan dhihi karaa waxay ka dhigan tahay in Iran ay ka jirto xorriyadda hadalka”, ayuu qof kamid ah dadkaas ku qoray tweet-ka.
Dad badan ayaa aad uga hadlay xariga gabadhan oo qaar waxaa ay shegeen in aysan ku baraarugsaneyn muuqaalka la sheegay in ay duubtay ee ay ugu gaftay diinta Islaamka, oo haddii ay garan lahayd aysan u bareeri lahayn khatarta ay gashay.
Baarlamanka Somalia oo la horgeeyay sharci “ogolaanaya in dalka laga furi karo Kaniisado”